Prefektoran’ny polisy : fampiharan-dalàna ny fanesorana ny logo-n’ny CUA | NewsMada
Prefektoran’ny polisy : fampiharan-dalàna ny fanesorana ny logo-n’ny CUA
Par Taratra sur 24/03/2017
Niandrasana inona vao notsiahivina ny lalàna ? Niteraka resabe tato ho ato ary zary lasa ady tsy vita ny fampiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny mari-pamantarana “logo” an’ny CUA amin’ireo taratasy eny anivon’ny fokontany.
Nitondra fanazavana ny prefektoran’ny polisy omaly fa fampiharana ny lalàna efa tamin’ny taona 2014 ny fanalana ireo mari-pamantaran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, teny anivon’ny fokontany.
Araka ny lalàna 2014-021 izao ampiharina izao ka tsy misy tokony hahataitra ny rehetra. Milaza ny lalàna laharana fahhefatra fa miankina tanteraka amin’ny prefektora ny fokontany. Antony nanesorana ny anarana sy ny “armorie” an’ny CUA eny amin’ireny taratasim-panjakana ireny ary ny saina tsy ho hita eny amin’ny biraon’ny fokontany izany.
Voalazan’ny lalàna laharana fahadimy ihany koa fa tendren’ny prefektora fa tsy mandalo fifidianana izany ireo sefom-pokontany.
Notsindrin’ny prefektora araka izany fa efa tamin’ny 2014 io lalàna io saingy izao vao hita ilay izy ka tsy mila hiandrasana baiko avy any amin’ny fanjakana foibe akory ny fampiharana izany. Mandray ny andraikiny avy hatrany ny prefektora mampihatra izany.
Nahoana no tsy tazana izany lalàna izany nandritra ny efa-taona fa niniana nafitsaka ka atao hiteraka savorovoro indray amin’izao fotoana mampifandrirotra ny CUA amin’ny fanjakana izao?